Times24 Nepal » सारेगमपमा प्रितमको अर्को जादु जजलाई समेत रुवाए / भिडियो हेरि सेयर गरौ।।
सारेगमपमा प्रितमको अर्को जादु जजलाई समेत रुवाए / भिडियो हेरि सेयर गरौ।।
टाईम्स २४ नेपाल।
इटहरीका गायक प्रितम आचार्य भारतीय रियालिटी शो सारेगमपको सेमिफाइनलमा पुगेका छन। उनले सेमिफाइनलमा पनि जजहरुको मन जितेका छन। उनको लुट गए बोलको गीत गाएको प्रोमो सार्वजनिक भएको छ जसमा उनलाई जजहरुले स्टेजमै गएर बोकेको देखाइएको छ। त्यती मात्र होइन जज बसेका कलाकार आनन्द राज आनन्दले उनको प्रस्तुती आफ्नो लागी यादगार प्रस्तुती भनेका छन। अर्का जजले थपेका छन्यहाँ गीत होइन जादु भइरहेजस्तो लाग्यो, मेरो जीवनमा ब्रेकअप भएको छैन, तर यो गीत सुन्दा भएजस्तै लाग्यो । प्रितमको प्रस्तुतीमा जजहरु रोएको देखाइएको छ।
उक्त एपिसोड यो हप्ताको शनिबार र आइतबार प्रसारण हुँदैछ। तर प्रितमको प्रस्तुति कुन दिन प्रसारण हुन्छ भन्ने खबर आएको छैन। नेपालको इटहरीका ११ बर्षीय प्रितम आचार्य यति बेला देश विदेशमा निकै चर्चाको पात्र बनेका छन। उनको गायकीको फ्यान यतिबेला भारतमा पनि निकै बढेका छन। उसो त अडिसनमै सोनु निगमको आवाजमा रहेको बोर्डर फिल्मको कि घर कव आओगे गीत गाएर सबैको मनमा बस्न सफल भएका थिए। भारत पाकिस्तानको सिमानामा आधारित फिल्म बोर्डरमा समाबेस यो गीत निकै चर्चित गीत हो।
यो गीत गया संगै उनको चर्चा सरेगमपमा अन्य प्रतिष्पर्धीको भन्दा निकै बढी भएको थियो. त्यसपछि पनि प्रितमले ब्याक टु ब्याक उत्कृष्ट प्रस्तुतिउ दिएका थिए । उदितनारायणलाई आफ्नो आइडल मान्ने प्रितमको चर्चापनि उदितनारायण संगै जोडेर कार्यक्रममा आउने अतिथिहरुले गर्ने गरेका छन् । भारतका चर्चित सेलिब्रेटीहरुले पनि सामाजिक संजालमा नेपालका उदयमान बाल कलाकार प्रितमको प्रसंशामा आफ्ना सब्द खर्चेका छन् ।
नेपालका प्रितम सहित आयुस केसीले भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका लाखौ बाल कलाकारलाई चुनौती दिंदै आफ्नो हुनर देखाइरहेका छन् । प्रितम संगै यतिबेला टप ९ मा पुगेका नेपालका अर्का बाल कलाकार आयुष केसीले समेत आफ्नो गायकीबाट सबैको मन जितेका छन् । उनले पनि विभिन्न समयमा चार्टबास्टर पर्फमेन्स दिंदै सबैको नजर आफूतिर तानेका छन् । लाखौबाट छानिएर आएका बाल कलाकारहरु मध्ये यतिबेला टप ८ को लागि ९ जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
केहि हप्ताको निरन्तर प्रतिस्पर्धीले दिएको प्रस्तुतिका आधारमा जुरीजजको मुल्यांकनको आधारमा धेरै नम्बर ल्याउने अघिल्लो चरणमा जाने गरेका छन् । नेपालका बल प्रतिभा आयुष र प्रितम दुबैलाई विजेताको दाबेदार मानिएको छ । आफ्नो हुनर देखाइरहेका दुबैलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना !
कार्यक्रम यही शनिबार र आइतबार राती ९ बजे प्रशारण हुँदैछ । हेरौं प्रोमो
प्रकाशित मिति May 30, 2019